संयोजकका तर्फबाट सन्देश
"म सहयात्रीहरुको खोजीमा छु । विशेष गरी युवाहरुको खोजीमा छु जसले समृद्ध नयाँ नेपालको नेतृत्व गर्नेछन् । आइन्सटाइनले भनेझैं – ‘मसँग कुनै विशेष गुण छैन । म उत्कण्ठापूर्ण जिज्ञासु मात्र हुँ ।’"
संयोजक, नयाँ शक्ति नेपाल
डा. बाबुराम भट्टराईलाई सामाजिक सञ्जालमा पछ्याउनुहोस
संयोजक, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल
‘समृद्ध नेपालको लागि संकल्पको अर्को नाम नै नयाँ शक्ति अभियान हो’
नेपालभित्र र संसारभरी छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइ र साथीहरु !
हामी साँच्चै नै नेपाली इतिहासको तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछौं । पहिलो चरण हाम्रा पुर्खाहरुले दक्षिण एसियाकै पहिलो स्वाधीन र सार्वभौम नेपाल राज्यको स्थापना गरे, भौगोलिक एकीकरण गरे । दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा पूरानो राज्य हुनुमा हामीलाई गौरव छ । तर राज्य भनेको जनता र जनताको खुशीयाली र समृद्धि हो । त्यसैले दोस्रो चरणमा हाम्रा पुर्खाहरुले जनताको अधिकार प्राप्तिको निम्ति १९९७ देखि संघर्ष गरे । अहिले लगभग ७५ वर्षपश्चात अर्थात् २०७२ सालसम्म आइपुग्दा नेपाललाई एउटा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको देशमा रुपान्तरण गर्न सक्यौं । यसका लागि गंगालाल श्रेष्ठदेखि जनयुद्ध, जनआन्दोलनसम्म महान शहीदहरुले बलिदान गर्नुभयो, हामी उहाँहरुप्रति अत्यन्त आभारी छौं, कृतज्ञ छौं र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौं ।
तर अब हामी समाज विकासको अर्को चरणमा आइपुगेका छौं । हामीले भर्खरै महाभारतको शिखर पार गरेका छौं तर हामी अझैं सगरमाथाको चुचुरोसम्म पुग्नु छ । त्यो भनेको विकास र समृद्धिको चुचुरो हो । देशको भूगोल र जनताको अधिकारको अन्तिम लक्ष्य भनेको जनताको खुशीयाली हो, समृद्धि हो । के तपाईं हामी हाम्रो आफ्नै जीवनकालमा नेपाललाई समृद्ध र सम्पन्न भएको देख्न चाहन्नौं ? हाम्रा अरबका खाडीहरुमा रगत र पसिना बगाइरहनुभएका युवाहरु नेपाल देश नै उन्नत भएको देख्न चाहनुहुन्न ? एउटा मरुभूमि त त्यति हराभरा हुन सक्दोरहेछ भने हाम्रो देश वन, जंगल, जमीन, जडिबुटी र जलस्रोतले यति भरपूर छ । तैपनि हामी किन गरीब छौं ? के अब हामी यो भन्दा बढी सम्पन्न भएको देख्न चाहँदैनौं ? के तपाईंहरु यो देशभित्रै रोजगारी सुनिश्चित भएको देख्न चाहनुहुन्न ? हाम्रा कर्मचारी, सेना, प्रहरीका साथी, विभिन्न पेशामा रहेका साथीहरुसँग म आग्रह गर्न चाहन्छु, के तपाईं हामी समृद्ध बन्न चाहँदैनौं ? तपाई हाम्रा छोराछोरीको पढाईको ग्यारेन्टी होस्, तपाईं हामी सबैको शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको ग्यारेन्टी होस्, के त्यस्तो समृद्ध नेपाल हामी निर्माण गर्न चाहँदैनौं ?
युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, बेलायत लगायतका समृद्ध मुलुकमा रहनुभएका आम नेपालीहरुसँग मेरो आग्रह छ, के हाम्रो देश पनि त्यस्तो समृद्ध राष्ट्र बन्न सक्दैन ? के हामीले पनि त्यस्तै सपना देख्न सक्दैनौं ? सक्छौं, सक्नुपर्छ । त्यसैले अब हामी नेपाललाई एउटा समृद्धिको चुचुरोमा लिएर जानको लागि नयाँ सोचका साथ एउटा संकल्प गर्नुपर्दछ, त्यही संकल्पको अर्को नाम नयाँ शक्ति निर्माण अभियान हो । त्यसैले यही २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनेपछि हामीले संकल्प गर्‍यौं, अब हामीले नेपाललाई नयाँ समृद्धिको अवस्थामा लैजानुपर्छ, त्यसको निम्ति नयाँ सोच, नयाँ दूरदृष्टि, भिजन, नयाँ नीति र कार्यक्रम र नयाँ नेतृत्वसहितको एउटा नयाँ राजनीतिक शक्ति देशलाई आवश्यकता पर्दछ । त्यसको परिकल्पना स्वरुप नै हामीले नयाँ शक्ति, नेपाललाई अगाडि बढाएका छौं ।
यसक्रममा म सबैसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, हामीले जुन यात्रा गर्‍यौं, इतिहासबाट पश्चात्ताप गर्ने होइन, त्यसबाट पाठ सिक्ने हो र आउँदा दिनहरुमा यात्रा सकारात्मक ढंगले, सकारात्मक सोंचका साथ अगाडि बढ्ने हो । त्यसैले हामी नयाँ शक्ति निर्माण अभियानमा जुटेका छौं । हामी सबैसँग आग्रह गर्न चाहन्छौं, यो नयाँ शक्ति तपाईं हामी सबैजना मिलेर बनाउने हो । कुनै बनिबनाउ सूत्र हामीसँग छैन । हामीसँग एउटा भिजन छ, नेपाललाई निश्चित अवधिभित्र गरिबी र बेरोजगारीबाट मुक्त गर्न सकिन्छ, संसारको सबभन्दा धनी देश बनाउन सकिन्छ, जहाँ गरिबी र बेरोजगारीबाट मुक्त समृद्ध नेपालीहरु रहन सक्छन् भन्ने सपना हामीसँग छ । त्यही सपना साकार गर्न नयाँ शक्तिको परिकल्पना हामीले गरेका छौं र यसमा सबै तह र तप्काका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको संलग्नता आवश्यक छ र त्यसैको निम्ति अहिले हामीले तपाईंहरुसँग सिधा सम्पर्क गरिरहेका छौं र तपाई हामी सबैका साझा संहितामा नयाँ शक्ति निर्माण गर्नुपर्दछ ।
यसको लागि तत्काल हामीले पाँच वटा ‘स’ मा केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता गरेका छौं । हाम्रो पहिलो र महत्वपूर्ण ‘स’ भनेको समतामूलक समृद्धि, यसमा नै सबै ध्यान लगाउनुपर्छ । निश्चित अवधिभित्र देशलाई विकासको चुचुरोमा पुर्‍याउनुपर्छ । अबको राजनीति भनेको विकासमुखी हुनुपर्छ । अहिलेसम्म हामीले आन्दोलनमुखी राजनीति गर्‍यौं, त्यो हामीले गर्नु पनि पर्दथ्यो । त्यो एउटा युग थियो तर अब विकासको निम्ति राजनीति गर्नकालागि हामीलाई हिजोकै राजनीतिक चिन्तन र सोंचले पुग्दैन । त्यसैले सम्पूर्ण ध्यान त्यसप्रति केन्द्रित गरेर निश्चित अवधिभित्र विकास सम्पन्न गर्नुछ । त्यसैको निम्ति यसलाई केन्द्रमा राखेर हामीले एउटा विकासको खाका कोर्दैछौं । यसको निम्ति निजी क्षेत्र, विज्ञ र तपाईंहरु सबैको सहभागितामा हामी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकासको योजना बनाउन चाहन्छौं । यो देश कृषिप्रधान हो, यसको आधुनिकीकरण कसरी गर्ने ? यहाँ पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ, यसलाई हामीले कसरी उपयोग गर्ने ? जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना छ, यसको सदुपयोग कसरी गर्ने ? विज्ञान र प्रविधिको प्रचुर सम्भावना छ, यसको भरपुर प्रयोग कसरी गर्ने ? यसमै केन्द्रित भएर एउटा खाका बनाउँछौं र हामीलाई के विश्वास छ भने तपाई हामी सबै मिल्यौं भने र सम्पूर्ण राजनीति नै विकासको राजनीतिमा लगायौं भने यो सम्भव छ ।
विकासका विभिन्न मोडेलहरु छन् । हामीले हाम्रो देशको आफ्नै मौलिकतामा विकासको परिकल्पना गरेका छौं । हामी तीब्र आर्थिक विकास चाहन्छौं । दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर केही दशकसम्ममा हासिल गरौं । वृद्धि मात्र होइन, त्यो रोजगारीमूलक होस् । धन त हामीले आर्जन गर्छौं, सम्पत्ति र समृद्धिलाई समतामूलक, सबै जनताले प्रतिफल पाउने विकासको मोडेल हामी चाहन्छौं । यसको निम्ति हामी सबैको सहयोगको अपेक्षा गर्दछौं । तर विकास र समृद्धिको लागि आम जनताको सहभागिता चाहिन्छ । त्यसैले हामी चाहन्छौं, विकास र समृद्धिको निम्ति देशका सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंगका जनसमुदाय एकजुट हौं । यो देश हिमाल, पहाड र तराईका विभिन्न जाति समुदायले बनेको छ । त्यसैले हामी हिमाल, पहाड र तराईलाई जोड्न चाहन्छौं । हामी कर्णालीलाई जोड्न चाहन्छौं, सेती महाकालीलाई जोड्न चाहन्छौं । मेचीदेखि महाकालीसम्मका सबै भूभागलाई जोड्न चाहन्छौं र यहाँका खस–आर्यहरु, आदिवासी–जनजातिहरु, मधेसी–थारुहरु सबैलाई एकताबद्ध गरेर एउटा समानुपातिक समावेशी प्रकारको देश बनाउन चाहन्छौं । महिला, दलित र मुस्लिम र सबै समुदायले अधिकारसम्पन्न भएर विकासको प्रतिफल पाउने लोकतन्त्रको हामी परिकल्पना गर्दछौं । त्यसैले समृद्ध नेपाल बन्नको लागि समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्र होस् भन्ने हामी चाहन्छौं ।
नेपालमा जुन संविधान बनेको छ, तत्कालै हामीलाई आर्थिक विकासको निम्ति स्थिरता चाहिन्छ, संविधानमा जुन शासकीय प्रणाली हामीले अंगालेका छौं त्यसबाट राजनीतिक स्थिरताको कम सम्भावना छ । यसैले हामी चाहन्छौं, तपाईं हामी सबैको सहभागिता र सक्रियतामा संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा हामी जानुपर्छ । त्यसो भयो भने देशले पाँच–दश वर्षसम्म स्थिर सरकार पाउँछ र त्यसले विकास र समृद्धिको कार्यक्रम लागू गर्न सक्छ ।
त्यसैले हामी चाहन्छौं, संसदमा चाहिँ सबै वर्ग, जाति, पेशा, लिंग, समुदायको प्रतिनिधित्व होस्, यसले नियम कानुन बनाओस् । कार्यकारिणी जुन मन्त्रिपरिषद हुन्छ, त्यो प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित होस्, त्यस्तो व्यवस्था भयो भने देशमा स्थिरता सम्भव हुन्छ र त्यसले विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
दोस्रो ‘स’ भनेको समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रको मोडेल पनि हामी यस्तो चाहन्छौं, खासगरी म युवा साथीहरुसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, युवा साथीहरु नेतृत्वमा नपुगेसम्म नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागिता नभएसम्म देश बनाउन सक्दैनौं । अहिले हाम्रा पार्टीहरुका स्वरुप यस्ता छन्, जहाँ युवाहरु नेतृत्वमा पुग्नको लागि ४०औं वर्ष संघर्ष गर्नुपर्छ । त्यस्तो अतिकेन्द्रिकृत प्रकारको पार्टी व्यवस्था र संगठनलाई हामीले बदल्नुपर्छ । हामी यस्तो सहभागितामूलक लोकतन्त्र हामी चाहन्छौं, पार्टी संगठनमा सबैको सहभागिता होस्, युवा नेतृत्वले पनि पार्टी नेतृत्वमा पुगेर प्रतिभा प्रदर्शन गर्ने अवसर पाउन् र जनताले पनि यदि पार्टीले गलत काम गर्‍यो भने खबरदारी गर्ने अवसर पाउन् । त्यसैले हामी लोकतन्त्रलाई जनता र कार्यकर्ताको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने प्रणालीको रुपमा विकास गर्न चाहन्छौं ।
तेस्रो ‘स’ भनेको सदाचार र सुशासन हो । अहिले राजनीतिलाई डर्टी गेम (फोहोरी खेल) भन्ने वितृष्णा छ, नयाँ पुस्ता राजनीतिमा आउन नै आकर्षित भइरहेको छैन, किनकी हाम्रो राजनीतिमा जुन विधि र प्रणाली हुनुपर्दथ्यो, ‘रुल अफ ल’ अथवा विधिको शासन हुनुपर्दथ्यो, त्यो हुन सकेन । मानिसहरुले राजनीतिलाई नै जनसेवाको रुपमा, स्वैच्छिक सेवाको रुपमा भन्दा व्यवसायिक रुप यसले अपनायो । त्यसैले सत्तामा पुग्नासाथ त्यसको दोहन गर्ने र निजी सम्पत्ति कमाउन राज्य कोषको शोषण/दोहन गर्ने पद्धति बस्यो, त्यसले गर्दा भ्रष्टाचार मौलायो । अहिले हामी विश्वकै एउटा भ्रष्टाचारी मुलुकमा दर्ज भएको छ । त्यसैले तपाईं हामी लज्जित हुनुपर्ने अवस्थामा छौं । के तपाईं हामी यसरी नै हाम्रो मुलुकलाई संसारको भ्रष्ट मुलुक भएको हेर्न चाहन्छौं ?के तपाई हामी शीर निहुराएर बस्नुपरेको हेर्न चाहनुहुन्छ ? विल्कुल हामीले त्यस्तो गर्न हुँदैन । यो राजनीतिलाई सफा गर्न सकिन्छ । त्यसैले हामी वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यासमा छौं र राजनीतिलाई फोहोरी खेलको बुझाईबाट मुक्त बनाउन चाहन्छौं । राजनीतिलाई बेरोजगारहरुको होइन, सबभन्दा सक्षम र क्षमतावान मानिस र युवाहरु आकर्षित होउन् र राजनीतिलाई पेशा होइन देश र जनताको सेवा गर्ने स्वयंसेवाको माध्यम बनाउन चाहन्छौं । यसलाई विधिको शासन र प्रणाली बनाउन चाहन्छौं । सबै कुरा पारदर्शी बनाउन चाहन्छौं । सबैबाट सल्लाह र सुझाव लिएर विधि र प्रणालीको विकास गर्न चाहन्छौं । हामी फोहोर राजनीतिलाई सफा गर्दै यसलाई सबैको आकर्षणको केन्द्र बनाउन चाहन्छौं । यसैको लागि हामीले नयाँ शक्ति निर्माण अभियान सुरु गरेका हौं । जनताले बुझ्न सक्ने हाम्रो पहिचान हुनेछ । यसले सुशासन र सदाचारलाई अर्को मूलमन्त्र बनाएका छौं ।
चौथो ‘स’ हामीले देशको स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राखेका छौं । मैले सुरुमै पनि भनेँ, यो देश दक्षिण एसियाको सबैभन्दा पुरानो स्वाधीन र सार्वभौम राष्ट्र भएपनि हामी दुर्भाग्यवश गरीब भयौं । त्यसैले छिमेकीबाट हेपिनुपर्ने, अपहेलित हुनुपर्ने, बिनाकारण नाकाबन्दीको भार बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नुको कारण हामी गरिब हुनु र आन्तरिकरुपमा एकताबद्ध नभएकै कारण हो । हामी भारत र चीनजस्ता ठूला छिमेकीको बीचमा छौं । यी दुवै राष्ट्रहरुसँग असल सम्बन्ध राखेर दुवै देशबीचको गतिशील पुलको भूमिका निर्वाह गरेर नेपालको सच्चा स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्न चाहन्छौं । जबसम्म हामी गरीब हुन्छौं, हामीलाई सबैले हेप्छन् । धनीले गरीबलाई हेप्ने सामान्य प्रचलन जस्तै धनी छिमेकीले गरीब छिमेकीलाई हेप्नु विल्कुल अन्यथा हुँदैन । यस्तो अवस्थामा हामी साँचो अर्थमा सार्वभौम र स्वाधीन बन्ने हो भने दुवै छिमेकीको आर्थिक समृद्धि र विकासबाट लाभ लिएर नेपाललाई धनी र सम्पन्न बनाउने दिशातर्फ जानुपर्छ ।
हामीले धेरैपटक भनेका छौं, नेपालमा जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना छ । तर हामीले प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनौं । भारत र चीनको पूँजी र प्रविधि यहाँ प्रयोग गरेर छोटै अवधिमा जलस्रोतको प्रचुर उपयोग गर्न सक्यौं र कमसेकम ८४ हजार मेगावाट मध्ये ४० हजार मेगावाट हामीले उत्पादन गर्न सक्यौं भने, त्यसको आधाले हामी झलमल्ल उज्यालोमा बस्न सक्छौं भने, आधा बिजुली निर्यात गरेर भारत र चीन दुवै देशको सहयोग लिएर देशको विकास गर्न सक्छौं ।
हाम्रो स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताको रक्षाको प्रश्न समृद्धिसँग जोडिएको छ । त्यसैले दुवै छिमेकीसँग असल सम्बन्ध राख्ने र संसारका सबै राष्ट्रहरुसँग पञ्चशीलको आधारमा सम्बन्ध राखेर अगाडि बढ्न चाहन्छौं । राष्ट्रियताको नाममा आफ्नो कुर्सीको स्वार्थका निम्ति जनतालाई छलछाम गर्ने प्रवृत्ति हुनुहुँदैन । राष्ट्रियता भनेको मुटुमा सञ्चय गरेर राख्ने देशभक्तिको भावना हो । यसको अभिवृद्धि गर्न सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनतालाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्न एउटा नयाँ राजनीतिक शक्तिको आवश्यक छ । त्यसको निम्ति सबै देशभक्त नेपालीहरु गोलबन्द हुन चाहन्छौं ।
पाँचौ ‘स’ भनेको समृद्ध समाजवाद हो । किनकी कुनै पनि राजनीतिक दल वा अभियानले एउटा निर्दिष्ट विचारधारामा उभिएको हुनुपर्छ । बिना बिचार अगाडि बढियो भने त्यो एउटा दिशाविहिन गाडी, जहाज जस्तो दुर्घटना हुने खतरा हुन्छ । त्यसैले हामी चाहन्छौं, मानवजातिले आविष्कार गरेका ज्ञान र विज्ञानका पछिल्ला आविष्कारहरुलाई पचाएर समृद्ध नेपालको २१औं शताब्दीको नयाँ विचार लिएर अगाडि बढ्न चाहन्छौं । त्यसको निम्ति हामी व्यक्तिको निजत्वको पनि सम्मान हुने र सामूहिकताको पनि कदर हुने प्रकारको समृद्ध नयाँ विचारमा टेकेर अगाडि बढ्न चाहन्छौं ।
नेपाल भर्खरै सामन्ती युगबाट राष्ट्रिय पूँजीको निर्माण गर्ने युगमा प्रवेश गरेको छ । एउटा वाम लोकतान्त्रिक जगमा टेकेर समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्ने स्पष्ट विचार लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसो हुनसक्यो हाम्रो लोकतन्त्र पनि एउटा समृद्ध लोकतन्त्र हुन्छ भने अन्तत: यो सामाजिक न्याय र जनताका समानतामा आधारित समृद्ध समाजवादको निर्माण पनि हामी गर्न सक्छौं । त्यसैले अहिले वाम लोकतान्त्रिक जगमा टेकेर समृद्ध समाजवादमा पुग्ने स्पष्ट सोच बोकेर अगाडि बढ्ने पनि हामीले अवधारणा बनाएका छौं ।
त्यसैले म सम्पूर्ण युवा पंक्तिलाई र नयाँ ज्ञान आर्जन गरेर देश–विदेशमा रहनुभएका साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईंहरु जुन ज्ञानबाट सुजज्जित हुनुहुन्छ,सबैले अहिलेको युग सुहाउँदो, नेपाल सुहाउँदो नयाँ विचार, नयाँ नीति र कार्यक्रम निर्माण गर्न पनि सहयोग गर्नुहोस् । देशको समृद्धिबाहेक हामीसँग अरु कुनै स्वार्थ छैन । हामी कसैप्रति पनि नकरात्मक दूराभाव राख्न चाहँदैनौं । हामी सबैप्रति सकारात्मक भाव राखेर अगाडि बढ्दछौं ।
यी पाँच ‘स’मध्ये समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर, समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई आधार बनाएर, सदाचार र सुशासनलाई माध्यम बनाएर, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तालाई मुटुमा राखेर समृद्ध समाजवादको दिशामा जाने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढ्दैछौं । यसबीचमा हाम्रो बारेमा भएको विभिन्न टिकाटिप्पणीलाई हामी अन्यथा मान्दैनौं । जुन रुखमा फल लाग्दछ, त्यसलाई झटारो हान्नु स्वभाविक हो । तर रुखले झटारो फर्कांउँदैन, यसले त सबैलाई फल बाँड्दछ । यही असल नियतका साथ अगाडि बढ्दछौं । हामी कसैका विरुद्ध होइन, सम्पूर्ण देशलाई एकताबद्ध गरेर सकारात्मक सोंचका साथ अगाडि बढ्न चाहन्छौं ।
पुरानै मानिस नयाँ ढंगले कसरी अगाडि जान सक्नुहुन्छ ? म आफैं पनि नेपाली जनताको दयामायाले प्रमुख कार्यकारी पदमा पुगेको व्यक्ति, कैयौं साथीहरुका जिज्ञासाहरु पनि छन् । यी पुरानै मानिसहरुले नयाँ काम कसरी गर्न सक्लान् भन्ने पनि लाग्न सक्छ । तर नयाँ भनेको नयाँ विचारले हुने हो, नयाँ सोच र शैलीले बन्ने हो । हामी नयाँ बन्ने कोसिस गर्दैछौं । त्यसकारण तपार्इंहरुले पनि साथ दिनुभयो भने हामीलाई थप नयाँ बन्न सहयोग पुग्दछ । म अर्थमन्त्री हुँदा, प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईंहरुको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकिएन होला । तर त्यतिबेला मुलुक संक्रमणकालमा थियो । हामी भर्खरै युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएका थियौं । त्यतिबेला शान्ति र संविधान निर्माणमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था थियो । त्यसैले सबैको आवश्यकता र चाहना पूरा गर्न सकिएन । तर पनि म अर्थमन्त्री हुँदा कतिपय सकारात्मक काम सुरु गरिएका थिए । युवा स्वरोजगार र राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु सुरु गरिएको थियो, त्यसले विकास र समृद्धिको झल्को दिएकै थियो । म प्रधानमन्त्री हुँदा त मैले बजेट पेश गर्ने अवसर नै पैदा भएन । त्यसैले विकास र समृद्धिको मेरा सोचहरु कार्यान्वयन गर्ने अवसर पाईनँ । तर पनि अवसरहरु प्राप्त गर्दा काम गर्न सक्छौं भन्ने पूर्ण विश्वास छ ।
त्यसैले अब हामी पुरानै कुरामा टाँसिएर बस्नु हुँदैन । नयाँ युगको नयाँ आवश्यकता अनुसार नयाँ शक्ति निर्माण गर्ने ध्येयका साथ अगाडि बढौं । हामी सम्पूर्ण दिलोज्यान लगाएर पूर्ण निष्ठाको साथ जनताको सेवा गर्न तत्पर छौं । आउनुहोस्, नयाँ शक्ति तपाई हामी सबैको हो । खासगरी युवाहरुको हो । देशमा बस्ने, विदेशमा बस्ने ५०औं लाख बाहिर जान बाध्य युवाहरु, तपाईहरु सबै देशमा फर्कने वातावरण बनाएर तपाईंहरुसँग भएको साधन, स्रोत र क्षमता लगाएर यो देश बनाउने नै नयाँ शक्तिको साेंच हो । त्यसैले खासगरी युवाहरु देश र विदेशमा रहनुभएका डाक्टर, इञ्जिनियर, बुद्धिजिवीहरु, व्यवस्थापनविदहरु तपाईंहरु सबैको क्षमताको सदुपयोग भयो भने यो देश बन्न सक्छ । र, देशभित्र भएका सम्पूर्ण श्रमिकहरु, मजदुरहरु, किसानहरु, महिला, दलित, जनजातिहरु, विपन्न समुदायहरु, तराई पहाड र हिमालमा बस्ने सम्पूर्ण नेपालीहरु एकजुट भइ यो नयाँ शक्ति निर्माण गरौं । अबको केही समयभित्र यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउनुको विकल्प छैन । हामी मरेपछि स्वर्गको कल्पना होइन, हाम्रै जीवनकालमा समृद्ध नेपालको कल्पना गरिरहेका छौं । त्यो सम्भव छ । आउनुहोस्, नयाँ शक्ति निर्माण अभियानमा सहभागी हुनुहोस् । म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईंहरुसँगै काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्ने र हाम्रै जीवनकालमा समृद्ध नेपाल बनाइसक्ने संकल्प म तपाईंहरु सबैसँग गर्दछु । नमस्कार !